တည်းခိုခန်းများ - ဟိုတယ်များ ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
အမျိုးအစား: တည်းခို - ဟိုတယ်
ဆိုးလ်မှာ Suwon အားလပ်ရက်အင်း Express ကို။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 2, 2020 | တည်းခို - ဟိုတယ် | 0
Holiday Inn Express Hotels သည်တောင်ကိုရီးယားတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား၊ အထူးသဖြင့်ကိုရီးယားမှာသူတို့ရဲ့စံနှုန်းတွေကိုသိချင်ရင် Suwon Holiday Inn Express မှာနေခဲ့တယ်။
ဆိုးလ်မှာ Seoul Euljiro Holiday Inn Express ။
ဟိုတယ်သည်ဆိုးလ်မြို့လမ်းထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။ ဟိုတယ်မှာရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ ဆိုးလ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တော်တော်များများမှာမရှိဘူး။
ဆိုးလ်မှာ InterContinental Seoul COEX ဟိုတယ်
ငါတည်းခိုခဲ့တဲ့ဆိုးလ်မှာအကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေထဲကတစ်ခုက။ ငါဟာဒီဟိုတယ်မှာထပ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချာဘိုကလေးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အကယ်၍ သင်အဆင်ပြေမှု၊ စတိုင်နှင့်အနီးအနားသို့လည်ပတ်ရန်နေရာများကိုမျှော်လင့်ပါကဤဟိုတယ်သည်၎င်းဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ဆိုးလ်မှာ Intercontinental Grand Seoul Parnas ဟိုတယ်
တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်ရှိ Intercontinental Grand Seoul Parnas ဟိုတယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသား။ ပံ့ပိုးမှုမရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အဲဒီအကြောင်းအရာအားလုံးမှတ်မိဖို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆိုးလ်မှာ အကြှနျုပျ၏ဂရန်းဟီလ်တန် Seoul နေပါ။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 1, 2020 | တည်းခို - ဟိုတယ် | 0
Grand Hilton Seoul သည်ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အခွင့်အရေးများစွာပေးသည်။ ဆိုးလ်မှာတည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့…
ဆိုးလ်မြို့၊ Glad Live Yeouido ဟိုတယ်
သင်ပျော်ရွှင်စွာနေသင့်သလား Yeouido? ၎င်းသည်တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်ရှိ SPG Glad Hotel ဖြစ်သည်။ ဒါဘယ်လိုနေလဲ? အတွင်းပိုင်းကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်ကိုဖတ်ပါ။ ငါနေခဲ့လို့ ၀ မ်းသာပါတယ်
ဆိုးလ်၊ Marriott Seoul Times Square ဟိုတယ်
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | နိုဝင်ဘာ 30, 2020 | တည်းခို - ဟိုတယ် | 0
Marriott Seoul Times Square ဟိုတယ်ရဲ့ Courtyard သည် Seoul Times Square Mall ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်တည်ဆောက်ထားသောဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အဆင်ပြေစွာတည်ရှိသည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူဆိုးလ်၏ဤအပိုင်းတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်
Seoul တွင် Glad Live Gangnam ဟိုတယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Glad Live Gangnam ဟိုတယ်သည်ဆိုးလ်မြို့၏အလုပ်များသောလမ်းများနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် SPG ဒီဇိုင်းဟိုတယ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုးလ်တွင်အဆင်ပြေစွာတည်ရှိသောဟိုတယ်။